mozika Nandray Anjara tamin ny fampisehoana tolo - tanana nokarakarain ny Tarika Mahaleo ho an i Nono ka nampiara - peo tamin i Dama ilay hira hoe Ise Kely
namany ka tsy afaka mahaleo tena sady atao hilazana ny anjara asan ny teny hafa na natao hampifandraisana teny roa hafa ao anaty tarika na fehezankevitra
raha. Teny enti - mandika ny teny vazaha hoe transcendence izy io. Teny iray tarika aminy ny hoe mihoa - draha izay ampiasaina ara - keviny ho mpamari - toetra. Amin ny
Raha heverina ho fehezankevitra ny tarika matoanteny amin ny filaza toe - javatra dia tsy ho fehezan - kevitra mahaleo tena izany fa fehezankevitra miankina
iray tarika amin ireo. teny grika: ὑπόστασις hupostasis sy οὐσία ousίa sy ὁμοούσιος homoousia sy φύσις phusis ary teny hafa iray tarika amin
nahazo ny loka tamin ny Gasitsara. 1995 : Nofidian i Dama ao amin ny Mahaleo tarika i Bodo hiarahihira aminy ilay hira hoe Mimoza Voafidy ho Ambasadaoron ny
ny boky nosoratany Tractatus theologico - politicus, 1670 dia milaza fa tarika iray miaraka amin ireo boky ara - tantara ny Bokin i Josoa sy ny Boky faharoan
adin ombalahy avy ao Ambohimanga sy Ambohitrabiby, izay nifarana tamin ny adin ny tarika an - daniny sy an - kilany ka nararaotinan Andriatsimitovy namakiana ady lehibe